Apple yakarova pachiuno chekuvhotesa kushandiswa kweParler social network | Ndinobva mac
Apple yakarova paruoko rwekuvhotesa kushandiswa kwenzanga network Parler
NaDonald Trump musimba, zvinhu zvakawanda zvakasiyana zvakaitika uye zvizhinji zvacho zvekunakidza kwetsika. Chazvino chave chiri chinzvimbo cheaimbove purezidhendi aine hutongi hwakanyanya kutonga munyika. Izvi zvakatungamira kune mamwe masocial network anoshandiswa nemapoka aya kuvharirwa nemakambani makuru eetekinoroji seApple, Google, Amazon kana Twitter. Zvisinei, tinozviwana isu tiine mutsetse wakanaka unovaparadzanisa nerusununguko rwekutaura. Zvino Seneta weU.S. Mike Lee weUtah neColorado Congressman Ken Buck, vanotsoropodza zviito zveApple pakati pevamwe.
Tichaedza tsanangura zvese zvakaitika, kuzviisa muchirevo.
1 Chii chinonzi Parler uye nei makambani makuru e tech achiivhara?
2 Sénata neCongressman vanodhonza Apple, Google neAmazon nenzeve dzekudzima kwaParler
Chii chinonzi Parler uye nei makambani makuru e tech achiivhara?
MunaNdira wegore rino, Google, Amazon neApple vakavhotesa Parler kubva kumisika yavo. Iyo pasocial network yakazvimisikidza se chishandiso chekutaurirana chinzvimbo chemapato ekurudyi-kurudyi uye vanoramba. Parler haana kutanga basa rake gore rino. Iye atove nenhoroondo refu yemakakatanwa ayo akatanga mu2018 naJohn Matze naJared Thomson. Asi kwaive kutanga kwegore rino paakasimbisa chinzvimbo chake, mushure mezviitiko zvakaitika muCongress.
Vanhu vakati wandei (vateveri vaTrump uye vasingade kusiya simba) vakasarudza kukwikwidza iyo US Congress, mune kumwe kurwisa kukuru kwerusununguko munyika yanhasi. Twitter yakafunga kuti yakwana nguva yekuvhotesa kutaurirana uku pakati penhengo dzaive dzichienderera mberi nekurwiswa uku. Neichi chikonzero, vazhinji vevateveri vekwakanyanya kurudyi vakafunga kutanga kushandisa Parler.
Yakanga isiri nguva yekutanga vateveri vaTrump kusimudzira pasocial network. MunaNovember 2020, uye nekurasikirwa kwesarudzo uye ma tweets abviswa nekuda kwehunyengeri musarudzo, zvimiro zve Parler akapetwa kaviri kusvika vanosvika mamirioni gumi vashandisi mumazuva mashoma chete. Izvo zvakasimbiswa, nenzira iyi, seyemagariro network yevanochengetedza uye vekupedzisira kurudyi vavhoti. Asi ndezvekuti ivo vakabatanidzwawo nerimwe boka rinorwisa nemamiriro azvino: Vanoramba, vasingatenderi hutsanana-hutsanana matanho anoiswa nevakuru venyika nevemunharaunda kupokana neCOVID-19. Izvo zvinowanzo taurwa: Ivo vabatana nenzara nechishuwo chekudya.
Zvichipa kutama kwevashandisi kuenda pasocial network uye sezvo pakanga pasina matanho ekuchengetedza kana kudzora kubva kune varidzi veParler, Google yakazivisa danho rekuvhotesa kunyorera muchitoro chayo. Nguva pfupi yapfuura, Apple yakabatana nechikumbiro neAmazon. Amazon yaive nekiyi nekuti aive maseva avo avakashandisa, saka Parles aive akaremara zvachose. Musoro wepiramidhi wekupenga uku kwese, yaive iyo kubiridzira kukuru kwedhatabhesi pasocial network. 70TB yedhata yakaburitswa, kusanganisira zvitupa zvine mazita, kero uye ruzivo rwekufonera.
Kune zvese izvi zvainge zvakavharwa, asi ikozvino zvinoita sekunge havana kuita zvakanaka.
Sénata neCongressman vanodhonza Apple, Google neAmazon nenzeve dzekudzima kwaParler
Seneta isu Mike Lee weUtah uye Colorado Congressman Ken Buck vakatumira tsamba yakabatana kuvakuru vakuru veApple, Google neAmazon kuti vabvunze zviito zvemakambani mukubvisa Parler social network kubva kuzvitoro zvavo zveapp uye webhu yekubata masevhisi kutanga kwegore rino.
Iyo nguva yezviito zvakatorwa kurwisa Parler pasocial network nemakambani ayo uye kuti zviito zvinoita sekushayikwa kwechero yemaitiro akarongeka anowanzopihwa mukuitika kwekutyorwa kwechibvumirano kunogadzira chimiro chekubatana kwepedyo. Aya maitiro aive cKupokana nekambani isingapomerwi kutyora chero mutemo. Muchokwadi, ruzivo rwakapihwa naParler kuImba Yekutarisa Komiti yakaratidza kuti Imba iyi yaibatsira kutevedzera mutemo kunyangwe pamberi paNdira 6.
Amazon mune yayo dura rekuchengetedza chikamu, yakamira kushanda naParler nekuda kwekutadza kwake kuyera zvine hukasha zvemukati. Parler akange adzoka online muna Kukadzi nekutambira kwakapihwa neSkySilk uye imwe nzira yekumisikidza ikozvino yakapihwa kune vashandisi veApple. Asi kwete yeApple.
Iyo nharo inoshumirwa uye gakava zvakare. Mutsamba yakatumirwa nevezvematongerwo enyika mune mibvunzo yakawanda iyo makambani anobatanidzwa anofanirwa kupindura. Mhinduro dzinozoongororwa navo uye ivo vachatora kana sarudzo yakazogadziriswa zvakanaka kana kwete. Mubvunzo uyo kunyangwe usingapedzisi uchisunga Apple kana uchigona kuunza kusagutsikana padanho rekutonga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Apple yakarova paruoko rwekuvhotesa kushandiswa kwenzanga network Parler
Iyo data yevanopfuura mamirioni mazana mashanu evashandisi veFacebook, yakaburitswa pamhepo
Kusainwa kutsva kwaApple kunotora hanya zvakanyanya pahutano hwedu